Tirro-koob Lagu Samaynayo Shaqaalaha Dawladda Somaliland | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Tirro-koob Lagu Samaynayo Shaqaalaha Dawladda Somaliland
Published on August 9, 2017 by sdwo · No Comments
Hargaysa (SDWO): Hay’adda shaqaalha dawladda jamhuuriyadda Somaliland ayaa shaaca ka qaaday in gebi ahaanba shaqaalaha kala dawan ee dawladda lagu samayn doono tiro-koob madax-taabasho.
Qorshahan tiro-koobka ah ee lagu samaynayo shaqaalaha dawladda Somaliland ayaa lagu tilmaamay mid looga gol-leeyahay sidii loo ogaan lahaa tiradda rasmiga ah ee shaqaalaha dawladda, isla markaana kor loogu qaadi lahaa aqoontoodda iyo tayadoodda.
Sidaasina waxa shaaca ka qaaday guddoomiyaha hay’adda shaqaalaha jamhuuriyadda Somaliland Sharmaake Axmed Geelle, oo maanta hadal ka jeediyay kulan lagaga arrinsanayay qorshaha madax-taabashadda shaqaalaha dawladda oo magaaladda Hargaysa loogu qabtay agaasimeyaasha guud ee wasaaradaha iyo hay’adaha dawladda.
Tallaabadan lagu tiro-koobayo shaqaalaha dawladda ayaa guddoomiyaha hay’adda shaqaaluhu wuxuu ku tilmaamay mid looga dan leeyahay in lagu ogaado tiradda rasmiga ah ee shaqaalaha dawladda.
Guddoomiyaha hay’adda shaqaalaha dawladda, oo ugu horayn faahfaahin ka bixinayay u jeedadda kulankaasi iyo waxyaabaha looga dan leeyahay, waxa uu yidhi “Waxaynu isugu nimid sidii aynu uga wada hali lahayn qorshaha madax taabasho ee shaqaalaha dawladda.
Shaqaalaha dawladda ee ku sugan daafaha jamhuuriyadda Somaliland waxay inooga baahan yihiin in aynu tirino si tayayntooda iyo kor u qaadistooda iyo tababarkooda iyo u dhug-yeelashada xaaladahooda kala duwan loo ogaado. Waxaana lagama maarmaan ah in aynu xogtoodii doono”.
Waxa kale oo uu sheegay Sharmaake Geelle, in kadib marka la dhamaystiro hawsha madax-taabashadda shaqaalaha in sidoo kale la diiwaangelin doono si meesha looga saaro wax uu ku tilmaamay Caagleyaasha.
Guddoomiye Geelle, ayaa xusay in sidoo kale madax-taabashadaasi lagu ogaad doono shaqaalaha hawl-gabka ah ee u baahan in la nasiyo. “Markaynu doonayno in shaqaalaha dawladda aynu soo madax-taabano, isla markaana ka qaadno diiwaangelin, Indhaha iyo Dhagahana aynu ku qaadano, waxaa inoo suurta geli doonta in aynu helno waxaa loo yaqaano Caaglaha.
Intaas markaynu helno, waxa kale oo suurta-gal noqonaysa saqaalaha dawladda imisaa da’a ah oo u baahan in la nasiyo, imisa ayaa Dumar ah, imisa ayaa Ragg ah, aqoon maxay leeyihiin? Taasina waxay inoo sahli doontaa in aynu ka tashano arrimahaas oo dhan”ayuu yidhi guddoomiyaha hay’adda shaqaalaha.
Isagoo ka hadlayay goorta la bilaabayo qorshahan iyo meelaha laga fulin doono, waxa uu yidhi “Dhawaan ayaana loo bixi doona wacyigelintii goboladda ee arrintan ku saabsanaa si ay shaqaalaha dawladda ugu war-geliso.
Waxaana arrintan madax-taabashada shaqaalaha dawladda laga samayn doonaa guud ahaanba goboladda dalkoo dhan”.
Isku soo wada duuboo, arrintani ayaa noqonaysa markii u horaysay oo tirro-koob sidan oo kale ah lagu sameeyo guud ahaanba shaqaalaha wasaaradaha iyo hay’adaha dawladda Somaliland ka hawl-galla.
Iyadoo la filayo in haddii qorshahani uu guulaysto ay taasi wax badan ka tari doonto sidii ay meesha uga saari lahayd shaqaale badan oo aan wax shaqo ah qaban, kuwo laba wasaaradood mushahar ka qaata iyo in la dar-dar geliyo adeegyadda ay wasaaraduhu bulshadda u qabtaan.